Mmadụ na mberede ehichapụ stof si gị ntị nwere ike ịbụ a na-agwụ ike oge maka onye ọ bụla. Otú ọ dị, a otutu nke na stof na-echekwa na gị azụ elu site n'oge ruo n'oge na e nwere ndị nhọrọ na-azụ ahụ furu efu data. Ọ bụ na-enye aka n'ihi na ikpe ebe ndị mmadụ hapụ ha data ruru ka usoro adịghị emezi emezi. Ihe ndabere atụmatụ na-eme n'ezie bụ ịzọpụta dị data na osisi ebe nchekwa nke gị blackberry dị ka gị kọntaktị na ndenye kalịnda ma ọ dịghị azọpụta azụ elu ihe ọ bụla na media kaadị.
N'ihi na ọtụtụ usoro, e nwere ụzọ dị iche iche na-ma bubatagharịa furu efu data ma ọ bụ wepụ otu si ndabere atụmatụ gị blackberry. Dị iche iche software dị na-ndabere extractors maka Blackberry na ụfọdụ n'ime ha na-enyere gị na converting data tinyere mmịpụta. Fọrọ nke nta niile nke Blackberry ndabere extractor ngwa nwere ike mfe wepụ ederede ozi, ozi, kọntaktị na ọbụna ndenye kalịnda ị na-eme, tinyere ihe aga eme na memos si ndabere.
Ka nwere anya na n'elu 3 Blackberry ndabere Extractors dị na ahịa.
Reincubate Blackberry ndabere extractor
Nke a n'elu gosiri Blackberry ndabere Adịrị software nwere ike bubatagharịa nakwa mfe tọghata gị data mgbe adịrị ya na ndabere. Ọ bụkwa vasatail banyere ụzọ mmịpụta na a haziri wepụ echekwara data na .BBB na .IPD gụnyere ndị ọhụrụ nsụgharị na-dị ka v2 .BBB faịlụ usoro. Ọ dị nnọọ mfe ịtụte niile gị furu efu data ma na-azụ gị niile data na otu click usoro na ihe ọ bụla ọzọ. Nke a nwekwara ike na-arụ ọrụ na kọntaktị gị akwụkwọ, ozi nile di iche iche, Ndenye na kalenda, ekwentị ndekọ na ọbụna na vidiyo na oyiyi.
Ọ bụ ihe dị mfe ma dị mfe iji software na otu click usoro wepụ ndabere faịlụ na ndị ọzọ na data gị Blackberry extractor.
The Reincubate Blackberry ndabere extractor anaghị akwado na BB10 version na i nwere ike iji ego na a tupu na-aga n'ihi na nke a software.
MyPhoneData Blackberry ndabere extractor maka Mac
Nke a bụ a pụrụ iche software, otu n'ime nanị n'ụzọ zuru ezu integrated Blackberry extractor software na-arụ ọrụ maka Mac na-enyere gị aka naghachi gị data, na blackberry ndabere faịlụ na-echekwa na akpaghị aka gị Mac. Ị nwere ike bubatagharịa ọ bụla faịlụ na e kere na Blackberry Desktọpụ Manager nke bụ dakọtara na software.
MyPhoneData Blackberry ndabere extractor maka Mac-enyere gị aka wepụ ederede ozi, na kọntaktị na a ọtụtụ ndị ọzọ na ihe ndị dị ka ozi ịntanetị na ihe aga-eme nke ndabere data faịlụ. The isi elu - n'ókè nke a software bụ na ị nwere ike iji ya na ọhụrụ Blackberry ndabere formats dị ka .BBB na .IPD. Na-eji software niile i nwere ime (mgbe nwụnye) bụ iji họrọ faịlụ mkpa ka ị naghachi wee pịa na 'Naghachi' button na-amalite mmịpụta.
Ị nwere ike nweta a free ikpe, na nke ị ike weghachite ma wepụ a otu faịlụ nke ọ bụla faịlụ ụdị. Ị nwere ike ime mkpebi dabere n'elu ikpe.
Ọ bụ mgbe ụfọdụ dakọtara na ole na ole na ngwaọrụ na ị nwere ike iji ego tupu ịzụrụ; ikpe nhọrọ bụ nnukwu Chekwa ebe a.
Ime Anwansi Berry
Ime Anwansi Berry site Mena Nzọụkwụ Innovative Solutions bụ oké software wepụ data ma tinyere na na ọ na-enyere gị aka iji tọghata IPD na BBB Blackberry faịlụ na nchekwa data faịlụ n'ime dị iche iche formats dị ka kwa chọrọ. The mmịpụta usoro dị nnọọ mfe ma i nwere ike inwe nile di iche iche nke ozi ma na ọbụna ekwentị oku akụkọ ihe mere na ndekọ tinyere akakabarede nke ọrụ akwụkwọ dị iche iche na formats gụnyere CSV na faịlụ ederede. I nwekwara ike dezie nchekwa data. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ọrụ enyi na enyi na-eji na-enweghị nsogbu ọ bụla. All ị na-chọrọ ime bụ họrọ faịlụ maka mmịpụta.
Onye ọrụ - enyi na enyi na mfe iji software na-enweghị nsogbu na njehie na nwụnye. Ị nwere ike wụnye ya na-amalite na-ewepụta na data enweghị nsogbu ọ bụla.
On ọtụtụ ngwaọrụ na nsụgharị, .BBB faịlụ-apụghị Ewepụtara na naanị .IPD format faịlụ nwere ike reloaded.
Wepụ Blackberry ndabere ndị ọzọ devices- Wondershare MobileTrans
Ndị a bụ n'elu 3 Blackberry ndabere extractor software na ahịa. Ọ dị mfe wepụ data si Blackberry backups. Ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke wepụ data si .bbb backups ma nyefee ha na ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka ọhụrụ gị Android, iPhone wdg, Wondershare MobileTrans bụ maa gị nhọrọ kasị mma. Ngwaahịa a pụrụ ịkwado wepụ BBB backups, itunes / iCloud backups, Samsung kies backups, wdg ma nyefee ọdịnaya ndị ọzọ deivces.
Nyefee na azụmahịa na kọntaktị na onye kọntaktị site na Blackberry ka Android na iPhone mfe.
Nanị ihe ngwọta nyefee SMS si Blackberry ka iPhone gburugburu ụwa.
Ofụri Esịt dakọtara na Blackberry ekwentị na-agba ọsọ OS 7.1 na mbụ ma BlackBerry® Desktọpụ Software 7.0 na 7.1.
Arụ ọrụ nke ọma na ihe karịrị 3000 igwe na dị iche iche na netwọk.
Ọ bụghị free
Download maka Win Download maka Mac
Top 30 Blu-ray egwuregwu na 2015
Ọ bụla Video Ntụgharị Nyocha na Alternatives
Top 6 SMS Tracker softwares Iji Nledo na Mobile SMS
Top 15 HD video Ntụgharị maka Windows na Mac
Top 5 ZIP na rar Paswọdu crackers
Top 5 Free Android Ngwa
> Resource> Top List> Top 3 Mfe Blackberry ndabere Extractors